Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iihotele kunye neeholide » Iimbadada: Ekuphela kweenkwenkwezi ezintlanu kuphela zehlabathi zazibandakanya iiholide
Iindaba zaseAntigua kunye neBarbuda • Iindaba zeBahamas Breaking • Iindaba zeBarbados Breaking • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zeCuracao Breaking News • Iindaba zeGrenada Breaking • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • Iindaba zeLuxury • iindaba • Iindaba eziNgcwele zikaSanta Lucia • Tourism • Iindlela zokuHamba | Iingcebiso Zohambo • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Iindawo ekuchithelwa kuzo iiSandals kunye neelwandle zibonisa ezona ndawo zibalaseleyo kwihlabathi liphela ezibandakanya iinkwenkwezi ezintlanu apho iindwendwe zinokonwabela iindawo ezinelwandle ezimhlophe ezinesanti emhlophe, indawo yokutyela yeGlobal Gourmet ™, indawo yokuhlala entle, utywala obungenamda, imidlalo enomdla yamanzi, nokunye okuninzi.
Xa iiSandals Resorts zisithi konke kubandakanyiwe, oko kuthetha ukuba konke kubandakanya zonke iindlela ezinokucingelwa nangendlela yeenkwenkwezi ezi-5.
Akukho zityholo zifihliweyo okanye izinto ezimangazayo, kwaye amava eendwendwe ahle kakhulu kwaye afikelela ngaphaya kokulindelweyo.
Ukusukela ngomzuzu undwendwe lusuka kwindiza, yonke into iyakhathalelwa ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya ukuya kwiingcebiso-ukusukela ekuqaleni kweholide ukuya kuthi ga ngoku xa iindwendwe zikhwela inqwelomoya ukubuyela ekhaya.
Inyani yile yokuba ezinye izinto ekuthiwa zibandakanya konke zongeza kwiirhafu- ezinje ngeerhafu zikarhulumente, ukuhanjiswa kwesikhululo seenqwelomoya, utywala beprimiyamu, imisebenzi ephuculweyo, ukutya okukhethekileyo, kunye nokucofa. Ukuthetha ngokuncipha, nantsi incam. Oku ngekhe kwenzeke kwiimbadada, kuba yonke into ibandakanyiwe, ngaphandle kwetyala elifihliweyo kwaye akukho nto yothusayo, ngaphandle kwazo zonke izinto ezimangalisayo abazenzayo zibandakanya- njengokunyaniseka kweenkwenkwezi ezintlanu.
Iimbadada zezomhlaba kuphela Ihotele yeenkwenkwezi ezi-5 ibandakanya iiholide apho ihlala iquka konke ngalo lonke ixesha. Iimbadada zinika iindwendwe ukubandakanywa okungaphezulu komgangatho kunayo nayiphi na enye indawo ekuchithelwa kuyo iiholide emhlabeni. Umzekelo, iiSandals zibandakanya ezona zikhetho zibanzi kwezemidlalo zamanzi- kwanezo zihamba ngemoto - zonke zibandakanyiwe, kubandakanya nomyalelo. Ziisandali kuphela ezibandakanya ukuntywila kwemihla ngemihla kunye nezixhobo zescuba, izikhokelo zobungcali, izikhephe zokuntywila zaseNewton, kunye neendawo eziphambili zokuntywila eCaribbean.
Emhlabeni, iiSandals zibandakanya ezona midlalo zibanzi njengegalufa kunye nemirhumo eluhlaza eluhlaza-ejikelezayo emva kokujikeleza kungabikho kujikeleza. Ayikho enye into ebandakanyayo enezifundo zegalufa eyenzelwe uGreg Norman.
Ukuya kwindawo yokuhlala, akukho nto imiselweyo malunga neeSandals suites, ezibonelela ngeeSuti ezinjengeSkypool Suites, Swim-Up Suites, Millionaire Suites, Rondoval Suites kumjikelo, iiVillas eziNgaphaya kwaManzi, kunye Ngaphezulu kwamanzi-eBungalows. Kwaye ziimbadada kuphela ezibandakanya abanqabi bomntu kwindawo yabo yothando kwiindlwana zeButler Suites.
Zonke iipremiyoli zotywala zibandakanyiwe ngalo lonke ixesha- akukho mfuneko yokulinda iyure enye yolonwabo emini. Kukho ukuya kwi-11 yeebhari kwindawo nganye yokungabinayo iithebhu kwaye akukho mida. Kwiisandali, iindwendwe zinokonwabela ukuthululelwa okungenasiphelo kwewayini kaRobert Mondavi Twin Oaks.
Yiba nomdla wokutya!
Ukutya okukhethekileyo kwiSandals, kulungile, okhethekileyo. Iimbadada zibandakanya ixesha elingenamda nangaliphi na ixesha leenkwenkwezi ezi-5 zokutya gourmet ukuya kuthi ga kwiivenkile ezikhethekileyo ezili-16 kwindawo nganye. Indawo yokutyela nganye inompheki okumgangatho wehlabathi usebenzisa ezona zinto ziphambili kwifama ukuya etafileni.
Zonke iimbadada ezibandakanya yonke impahla yeholide ibandakanya:
Yitya + SELA
Indawo yokutyela eneenkwenkwezi ezintlanu ukuya kuthi ga kwi-5 zokutyela Indawo nganye
Isidlo sakusasa, isidlo sasemini, isidlo sangokuhlwa kunye naliphi na ixesha lokutya
Unlimited iziyobisi zotywala
Ukuya kutsho kwiibhari ezili-11 ngeholide nganye
Imivalo egciniweyo kwigumbi ngalinye
Unlimited URobert Mondavi Twin Oaks® iwayini
Iqinisekisiwe i-PADI ukudayiva emanzini (Nazo zonke izixhobo)
Uhambo lwe-Snorkeling (kunye nazo zonke izixhobo)
Iikati zeHobie, iibhodi zokubheqa, i-kayaks
Imiyalelo yobungcali kwezemidlalo yamanzi
lwaBucala Iziqithi eziselunxwemeni kwiiSandals Royal Caribbean kunye neembadada Royal Bahamian
Imirhumo eluhlaza kuthi yegalufa iikhosi ezikhethiweyo zokungcebeleka
Ibhola yevoli, ulwandle, iitafile zephuli
Imini nobusuku intenetya
Iziko lo kuPhepha ngezixhobo ezikumgangatho ophezulu
Imini nobusuku nokuzonwabisa kubandakanya imiboniso bhanyabhanya
Injini imidlalo yamanzi kwiindawo zokuhlala ezikhethiweyo
Exclusive Amalungelo okutshintsha phakathi kweeholide
Zonke iingcebiso, iirhafu kunye nesisa
Ukuhanjiswa kwesikhululo senqwelomoya
Indawo yokuhlala eLounge Exclusive Airport eJamaica naseSaint Lucia
Zonke iiholide zeembadada ngabantu abadala kuphela, eziyilelwe izibini ezithandanayo
I-WiFi yasimahla (kwigumbi kunye nazo zonke iindawo eziqhelekileyo)
Umtshato wasimahla (ngokuhlala ubusuku obungu-3 okanye ngaphezulu)
Personal Inkonzo yomqeshi kunye nokudluliselwa kwangasese kwiindawo ezininzi eziphezulu